एकै रातमा एनसेलका १७ ओटा टावर जलेर स्वाह, कहाँ कहाँ जलाइए एनसेलका टावर ? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > एकै रातमा एनसेलका १७ ओटा टावर जलेर स्वाह, कहाँ कहाँ जलाइए एनसेलका टावर ? हेर्नुस्
काठमाडौँ- एनसेलका विभिन्न १७ स्थानका टावरहरुमाथि आगजनी भएको छ । अदालतको आदेशपछि पनि कर तिर्न नमानिरहेको एनसेलको देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका टावरमाथि आगजनी भएका छन् । कतिपय ठाउँमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता र विभिन्न अन्य केहि भूमिगत संगठनहरुले एनसेलमाथि आक्रमण सुरु गरेका हुन् ।
बागलुङ नगरपालिका–७ मुल्पानी, गल्कोट नगरपालिका–८ काँडेवाँस र निसीखोला गाउँपालिका–७ राजकुतमा रहेको एनसेलको टावर आगजनी भएको छ । यी लगायतगरी कुल १७ ठाउँमा एनसेलका टावरहरु जलाइएका छन् ।
यस्तै अछाम, कपिलवस्तु, काभ्रे, र रौतहटमा पनि एनसेलका टावरहरु जलाइएका छन्। हामी थप विवरण अपडेट गर्दैछौं।